• ကမ္ဘာ (ကုန်းမြေချည်းသာ၊ အန္တာတိကတိုက် မပါဝင်ပေ။) ၁၃၄,၉၄၀,၀၀၀ ၅၂,၁၀၀,၀၀၀ ၇၈၁၂၆၀၀၈၀၀ ၅၈ ၁၅၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၃, ၂၀၂၁ USCB's world population clock
ကမ္ဘာ (ကုန်းမြေ) ၁၄၈,၉၄၀,၀၀၀ ၅၇,၅၁၀,၀၀၀ ၇၈၁၂၆၀၀၈၀၀ ၅၂ ၁၃၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၃, ၂၀၂၁ USCB's World population clock
ကမ္ဘာ (ရေထုအပါအဝင်) ၅၁၀,၀၇၂,၀၀၀ ၁၉၆,၉၄၀,၀၀၀ ၇၈၁၂၆၀၀၈၀၀ ၁၅ ၃၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၃, ၂၀၂၁ USCB's World population clock
12 ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၄၃၉၉၈ ၅၅၅၉၈ ၁၇၀၀၉၉၁၀၂ ၁၁၈၁ ၃၀၅၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
22 အာရူးဗာ (နယ်သာလန်ဘုရင့်နိုင်ငံ) ၁၈၀ ၆၉ ၁၀၅,၆၆၈ ၅၈၇ ၁,၅၂၀ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၈
29 ကျူရာဆိုး (နယ်သာလန်ဘုရင့်နိုင်ငံ) ၃၆၃.၉၁ ၁၄၁ ၁၆၁,၅၇၃ ၄၄၄ ၁,၁၅၀ ဇွန် ၁၆၊ ၂၀၁၈
33 နယ်သာလန် ၄၁၅၂၆ ၁၆၀၃၃ ၁၇၄၉၂၆၇၆ ၄၂၁ ၁၀၉၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
35 အိန္ဒိယ ၃၂၈၇၂၄၀ ၁၂၆၉၂၁၁ ၁၃၇၅၁၉၄၃၉၆ ၄၁၈ ၁၀၈၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Population clock based on 2011 census
36 အစ္စရေး ၂၂၀၇၂ ၈၅၂၂ ၉၃၁၃၁၄၀ ၄၂၂ ၁၀၉၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
40 ဖိလစ်ပိုင် ၃၀၀၀၀၀ ၁၁၅၈၃၁ ၁၁၀၃၇၂၀၈၂ ၃၆၈ ၉၅၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
54 ပါကစ္စတန် ၈၀၃၉၄၀ ၃၁၀၄၀၃ ၂၁၀၂၈၇၁၀၁ ၂၆၂ ၆၇၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
89 တရုတ် ၉၆၄၀၈၂၁ ၃၇၂၂၃၄၂ ၁၄၀၇၉၉၂၇၉၅ ၁၄၆ ၃၇၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official estimate
105 ထရန်နစ္စတြီးယား ၄,၁၆၃ ၁,၆၀၇ ၄၇၅,၆၆၅ ၁၁၄ ၂၉၅ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅ Archived3August 2017 at the Wayback Machine.
106 ဂျော်ဒန် ၈၉၃၄၂ ၃၄၄၉၅ ၁၀၇၈၆၆၉၄ ၁၂၁ ၃၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
122 မလေးရှား ၃၃၀၈၀၃ ၁၂၇၇၂၄ ၃၃၇၆၀၇၀၀ ၁၀၂ ၂၆၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
124 အီဂျစ် ၁၀၀၂၄၅၀ ၃၈၇၀၄၈ ၁၀၀၉၅၆၇၉၂ ၁၀၁ ၂၆၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
138 မော်ရိုကို ၄၄၆၅၅၀ ၁၇၂၄၁၄ ၃၅၆၂၆၉၉၉ ၈၀ ၂၀၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
160 အီကွေဒေါ ၂၇၆၈၄၁ ၁၀၆၈၈၉ ၁၇၅၈၄၂၅၁ ၆၄ ၁၆၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official projection
167 အီရန် ၁၆၄၈၁၉၅ ၆၃၆၃၇၂ ၈၃၄၆၇၄၆၈ ၅၁ ၁၃၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
179 ကိုလံဘီယာ ၁၁၄၁၇၄၈ ၄၄၀၈၃၁ ၅၁၂၄၂၅၃၄ ၄၅ ၁၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
191 အမေရိကန် ၉၈၃၃၅၁၇ ၃၇၉၆၇၄၂ ၃၃၂၇၇၂၆၄၃ ၃၄ ၈၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
199 ဘရာဇီး ၈၅၁၅၇၆၇ ၃၂၈၇၉၅၆ ၂၁၃၄၂၂၆၈၂ ၂၅ ၆၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
204 ဆွီဒင် ၄၅၀၂၉၅ ၁၇၃၈၆၀ ၁၀၃၉၆၂၁၈ ၂၃ ၆၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
215 နယူးဇီလန် ၂၇၀၄၆၇ ၁၀၄၄၂၈ ၅၀၈၀၃၄၀ ၁၉ ၄၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
240 ကနေဒါ ၉၉၈၄၆၇၀ ၃၈၅၅၁၀၃ ၃၇၈၆၄၈၀၅ ၄ ၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official estimate
245 ဩစတြေးလျ ၇၆၉၂၀၂၄ ၂၉၆၉၉၀၇ ၂၅၉၄၀၆၆၆ ၃ ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official estimate
ဤစာရင်းတွင် လူဦးရေသိပ်သည်းမှုအများဆုံး နိုင်ငံ ၁၀၀ ဖြစ်ပါသည်။
1 ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၄၃၉၉၈ ၅၅၅၉၈ ၁၇၀၀၉၉၁၀၂ ၁၁၈၁ ၃၀၅၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
5 နယ်သာလန် ၄၁၅၂၆ ၁၆၀၃၃ ၁၇၄၉၂၆၇၆ ၄၂၁ ၁၀၉၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
7 အိန္ဒိယ ၃၂၈၇၂၄၀ ၁၂၆၉၂၁၁ ၁၃၇၅၁၉၄၃၉၆ ၄၁၈ ၁၀၈၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ India Population clock Archived 24 November 2015 at the Wayback Machine.
8 အစ္စရေး ၂၂၀၇၂ ၈၅၂၂ ၉၃၁၃၁၄၀ ၄၂၂ ၁၀၉၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
9 ဘူရွန်ဒီ ၂၇,၈၁၆ ၁၀,၇၄၀ ၁၀,၆၈၁,၁၈၆ ၃၈၄ ၉၉၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
11 ဖိလစ်ပိုင် ၃၀၀၀၀၀ ၁၁၅၈၃၁ ၁၁၀၃၇၂၀၈၂ ၃၆၈ ၉၅၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock Archived3April 2019 at the Wayback Machine.
16 ပါကစ္စတန် ၈၀၃၉၄၀ ၃၁၀၄၀၃ ၂၁၀၂၈၇၁၀၁ ၂၆၂ ၆၇၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
17 ဂျာမနီ ၃၅၇,၁၆၈ ၁၃၇,၉၀၃ ၈၂,၇၄၀,၉၀၀ ၂၃၂ ၆၀၁ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၇ Official quarterly estimate
22 အီတလီ ၃၀၁,၃၀၈ ၁၁၆,၃၃၆ ၆၀,၄၈၃,၉၇၃ ၂၀၁ ၅၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Monthly official estimate
27 တရုတ် ၉၆၄၀၈၂၁ ၃၇၂၂၃၄၂ ၁၄၀၇၉၉၂၇၉၅ ၁၄၆ ၃၇၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official estimate
36 ဂျော်ဒန် ၈၉၃၄၂ ၃၄၄၉၅ ၁၀၇၈၆၆၉၄ ၁၂၁ ၃၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
40 တူရကီ ၇၈၃,၅၆၂ ၃၀၂,၅၃၅ ၈၀,၈၁၀,၅၂၅ ၁၀၃ ၂၆၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
41 ကျူးဘား ၁၀၉,၈၈၆ ၄၂,၄၂၇ ၁၁,၂၃၉,၂၂၄ ၁၀၂ ၂၆၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Annual official estimate
45 မလေးရှား ၃၃၀၈၀၃ ၁၂၇၇၂၄ ၃၃၇၆၀၇၀၀ ၁၀၂ ၂၆၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
46 အီဂျစ် ၁၀၀၂၄၅၀ ၃၈၇၀၄၈ ၁၀၀၉၅၆၇၉၂ ၁၀၁ ၂၆၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
56 မော်ရိုကို ၄၄၆၅၅၀ ၁၇၂၄၁၄ ၃၅၆၂၆၉၉၉ ၈၀ ၂၀၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
58 ဘာကီးနားဖားဆို ၂၇၀,၇၆၄ ၁၀၄,၅၄၃ ၁၉,၆၃၂,၁၄၇ ၇၃ ၁၈၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official projection
60 တူနီးရှား ၁၆၃,၆၁၀ ၆၃,၁၇၀ ၁၁,၄၄၆,၃၀၀ ၇၀ ၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
65 အီကွေဒေါ ၂၇၆၈၄၁ ၁၀၆၈၈၉ ၁၇၅၈၄၂၅၁ ၆၄ ၁၆၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official projection
69 အီရန် ၁၆၄၈၁၉၅ ၆၃၆၃၇၂ ၈၃၄၆၇၄၆၈ ၅၁ ၁၃၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
71 အာဖဂန်နစ္စတန် ၆၄၅,၈၀၇ ၂၄၉,၃၄၇ ၂၉,၇၂၄,၃၂၃ ၄၆ ၁၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
72 ဘီလာရုဇ် ၂၀၇,၆၀၀ ၈၀,၁၅၅ ၉,၄၈၄,၃၀၀ ၄၆ ၁၁၉ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Quarterly official estimate
74 ကိုလံဘီယာ ၁၁၄၁၇၄၈ ၄၄၀၈၃၁ ၅၁၂၄၂၅၃၄ ၄၅ ၁၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
77 ဗင်နီဇွဲလား ၉၁၆,၄၄၅ ၃၅၃,၈၄၁ ၃၁,၄၃၁,၁၆၄ ၃၄ ၈၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection
79 အမေရိကန် ၉၈၃၃၅၁၇ ၃၇၉၆၇၄၂ ၃၃၂၇၇၂၆၄၃ ၃၄ ၈၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
81 ဘရာဇီး ၈၅၁၅၇၆၇ ၃၂၈၇၉၅၆ ၂၁၃၄၂၂၆၈၂ ၂၅ ၆၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
82 အင်ဂိုလာ ၁,၂၄၆,၇၀၀ ၄၈၁,၃၅၄ ၂၈,၃၅၉,၆၃၄ ၂၃ ၆၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
85 ဆွီဒင် ၄၅၀၂၉၅ ၁၇၃၈၆၀ ၁၀၃၉၆၂၁၈ ၂၃ ၆၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
86 ဇမ်ဘီယာ ၇၅၂,၆၁၂ ၂၉၀,၅၈၅ ၁၆,၄၀၅,၂၂၉ ၂၂ ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection
97 ရုရှား ၁၇,၁၂၅,၂၄၂ ၆,၆၁၂,၀၉၃ ၁၄၆,၈၀၉,၆၄၃ ၉ ၂၃ ဩဂုတ် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
99 ကနေဒါ ၉၉၈၄၆၇၀ ၃၈၅၅၁၀၃ ၃၇၈၆၄၈၀၅ ၄ ၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official estimate
100 ဩစတြေးလျ ၇၆၉၂၀၂၄ ၂၉၆၉၉၀၇ ၂၅၉၄၀၆၆၆ ၃ ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official estimate
World Population Prospects။
Eurostat-Tables, Graphs and Maps Interface（TGM）table။ European Commission။ ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
စပိန်နိုင်ငံမှ ၎င်း၏နယ်မြေဖြစ်သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုထားသည်။
Borders and area of Palestinian autonomy are not final
Excluding the population and area of Iraqi Kurdistan, which cover governorates of Erbil, Sulaymaniyah, Halabja and Dohuk. BUT including Kirkuk Governorate and Diyala Governorate
ခရိုင်းမီးယား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနှင့် ဆီပတ်စတိုပိုမြို့တို့၏ ဧရိယာနှင့် လူဦးရေစာရင်းတို့ပါဝင်ပြီး ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ရှိ ယူကရိန်းနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတို့ကို ရုရှားနိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ကြော်ငြာထားပြီး ဖြစ်သည်။
မော်ရိုကိုနိုင်ငံနှင့် ဆာရာဝီ အာရပ်ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံနှစ်ခုစလုံးမှ ဒေသတစ်ခုလုံးအား ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ထိုနှစ်နိုင်ငံကြား၌ အုပ်ချုပ်မှု ခွဲဝေ အုပ်ချုပ်သည်။
အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှ ပိုင်ဆိုင်သည်ဟုဆိုသည့် ကျွန်းများ